प्रतिनिधि सभा विघटन : राष्ट्रघातीहरुको विनासको दिशालाई स्वागत गरौँ – भरत दाहाल – Halkhabar kura
१२ पुष २०७७, आईतवार ०१:२९
प्रतिनिधि सभा विघटन : राष्ट्रघातीहरुको विनासको दिशालाई स्वागत गरौँ – भरत दाहाल
संसदीय प्रणाली नै अस्थिरता र अभिसाप हो– केपी ओलीले संसद विघटन गरेको ठिक कि ओलीको सरकार ढलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ठिक भन्ने बहस नेपालीहरुका लागि कुनौ तुकको बहस होईन। ओलीले संसद विघटन गरेर अस्थिरता ल्याए भन्ने एकथरी दलालहरुको कुतर्क छ। ओलीले संसद विघटन नगरेको भए उनको सरकार ढल्थ्यो भन्ने कुरा संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावले देखाईसकेको छ। संसद विघटन गर्दा केही कालका लागि प्राप्त हुने हो ओलीको निरकुशता। उनको सरकार ढलेको भए ३..३ महिनामा सरकार बदलिने अस्थिरता उत्पन्न हुन्थ्यो। यस्ता निकृष्ट परिणामका पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नु निकम्मापन हो।
संसद विघटन भएर माधव-दाहाललाई घाटा लागेको छ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था आएको भए ओलीलाई घाटा लाग्थ्यो। सत्ताधारी दल विभाजन हुने निश्चित थियो। यस्तो अवस्थापछि कसैको बहुमत हुँदैनथ्यो र विदेशीहरुले १ सिटे व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थे। २ ठाउँको हरुवा माधव नेपाल र खिलराजको तमासा हामीले हेरिसकेका छौं। सत्ताधारी दल फुटिसकेको छ। संसदको पुर्स्थापना भएपछि कसैको बहुमत हुँदैन र विदेशीहरुले दल नामका विदेशी गिरोहहरुलाई सत्तामा पुर्याईदिने वार्गेनिङ गरेर आफ्नो विश्वसनिय एजेन्टलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछन्।
१० बर्षको पञ्चायत काल छोडेर २००७ साल यताको ४० बर्षे संसदीय शासन कालमा ३३ जना प्रधानमन्त्री भएका छन्। बिचमा त्रिभूवन, महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले ३ पटक प्रधानमन्त्रीको काम चलाएको घटना जोड्ने हो भने ४० बर्षे संसदीय कालमा ३६ वटा प्रधानमन्त्री भएका छन्। संसदीय प्रणाली नै नेपालको अस्थिरता र अभिसापको मूल कारण हो भन्ने कुरा यसैबाट थाहा हुन्छ। तसर्थ, अहिलेको बहस ओली कि संसदको पुनर्स्थापना भन्ने होईन। बहसको विषय संसदीय प्रणालीको अन्त्यको हो। यो विदेीहरुले हस्तान्तरण गरेको आयातित प्रणाली हो, जो देशको मौलिकतासंग कतै पनि मेल खाँदैन र स्वदेशी पात्रहरु स्विकार गदैन।
संसद विघटन : राजनीतिक कि कानूनी प्रश्न – दुइतिहाइले काम नगर्ने व्यवस्थाकाे चुनाव किन गर्ने ?
संसद विघटनको घटनालाई कानूनी रुपमा हेर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ। सिवदेशी दलालहरुले संविधान र कानूनका धारा र दफामा घुमाएर नेपालीहरुलाई ३० बर्षदेखि गोलचक्करमा घुमाउँदै आएका छन्। अब यस्तो बहसको कडा रुपमा प्रतिवाद हुनु पर्दछ। दलालहरुको शासनमा राज्य कहिल्यै पनि संविधान र कानूनबाट चलेको छैन र चल्दैन पनि। देशको अर्थतन्त्र संविधानको कुन धाराले बेचेको हो ?
दासढुंगा, दरबार हत्याकाण्ड, १७ हजार नेपालीहरुको हत्या र गौर हत्याकाण्ड कुन कानूनले छानबिन गर्न रोकेको हो ? भ्रष्टाचार गर्न कुन कानूनले अनुमति दिएको हो ? २०६३ बैशाख ११ गते संसदको पुनर्स्थापना कुन कानूनले गरेको थियो ? ४० लाख ईण्डियनहरुलाई नागरिकता संविधानको कुन आधारले वितरण गरेको थियो ? एनजिओहरुले मन्त्रालय चलाउने कानून कहाँ छ ?
संसदको विघटनको घटना राजनीतिक हो, कानूनी प्रश्न होईन। दुईतिहाई नजिकको बहुमत दिएर पनि सरकार चल्दैन भने अब के का लागि किन चुनाव गर्ने ? प्रत्येक नेपालीका टाउकामा ६० हजार विदेशी ऋण पुर्यउने लुटेरातन्त्र किन स्विकार गर्ने ? ८० लाख नेपाली देश निकाला गर्ने व्यवस्थामा किन घुम्ने ? चुनावको बकबास गर्नेहरु आततायी हुन्। संसदीय प्रणालीको अन्त्य अबकाे एकमात्र आवश्यकता हो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको पछाडीका ३ मूख्य आधारहरु
केपी ओलीले संसद विघटन किन गर्नु पर्यो होला ? केही मानिसहरुले यो घटनालाई सत्ताधारी दलभित्रको झगडाको कारणका रुपमा लिएका छन्। केही मानिसहरुले यसलाई ओलीको महत्वाकांक्षाका रुपमा हेर्ने गरेका छन् भने कसैले यसलाई माधव समूहको अवरोधको परिणामका रुपमा ब्याख्या गरेका छन्। यी सबै कारणहरु बाहिर देखाईने निमित्त कारणहरु मात्र हुन्।
संसद विघटनको असली कारण हामीले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको संदर्भमा खोज्नु पर्दछ। जुनबेला १२ बुँदे समझदारी भएको थियो, त्यो बेला विश्वको राजनीति पश्चिमा वर्चश्वमा आधारित एकध्रुविय थियो। नेपालभित्रको बाह्य शक्ति सन्तुलनमा ईण्डियाको एकाधिकार थियो र देशभित्रको आन्तरिक शक्ति समिकरण पूर्ण रुपमा दलहरुको पक्षमा ढल्केको थियो।
आज ती ३ वटै अवस्थाहरु उल्टिएका छन्। विश्वको शक्ति सन्तुलन बहुध्रुविय भएर गएको छ। नेपालभित्रको बकाह्य शक्ति सन्तुलनमा ईण्डियन प्रभूत्व तेश्रो स्थानमा खुम्चिएको छ भने देशभित्रको आन्तरिक शक्ति समिकरण दलाल दलहरुका विरुद्धमा उभिएको छ। दल नामका अपराधि विदेशी गिरोहहरु जनताबाट पूर्ण रुपमा तिरष्कृत भएर गएका छन्।
जुन ३ वटा मूलभूत आधारहरुका भरमा १२ बुँदेको विदेशी डिजाईन लादिएको थियो, ती सबै आधारहरु भत्किएपछि यो अपराधितन्त्रलाई भरथेग गर्ने कुरा बाँकि रहेन। जग नै भत्किएपछि भवन भत्किनु र यसका अंगहरु क्षतविक्षत हुनु स्वाभाविक थियो। संसद विघटनको घटना अब यो प्रणाली फर्कन नसक्ने गरी विघटनको दिशामा धकेलिएको घटना हो।
दलालहरुको विनाशको दिशालाई स्वागत गरौं !
देशभित्र धेरै घटनाहरु घटिसकेका छन्। विदेशीहरुले प्रयोग गरेका भाडाका सिपाहीहरुको विघटन सुरु भएको छ। नेपाल र नेपालीहरुका विरुद्धमा यीनीहरुले थापेको पासोमा आफै फसेका छन्। पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने उखान छ। अब यीनीहरुले आफ्नो अवशान र नेपालको उत्थानको दिन हेर्ने समय आएको छ।
राष्ट्रियता र नागरिकहरुको हत्या गर्दा यी हत्याराहरु अट्टहासको हाँसो हाँसेका थिए। दिल्लीको पटांगिनीमा बसेर नेपाल विरुद्ध योजना बनाउँदा यी अपराधिहरु खुसिले गद्गद थिए। नेपालीहरुको खुनपसिना लुटेर बादशाहको जीवन जिउँदा यी अपराधिहरु आफू स्वर्गको राजा ईन्द्र भैसकेको अनुभूति गरेका थिए। आज समय उल्टिएको छ। समाजको विकासको प्रकृया यीनीहरुको इच्छामा चल्दैन। देश र दुनियाँ सबै बदलिएका छन्। यीनीहरुको विनाश अवश्यंभावी छ।
Previous प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै अब “एमसीसी” फिर्ता जाने निश्चित !
Next यस्तै हो भने यो अब यो “सङ्घीय गणतन्त्र” गयो – प्रा. युवराज संग्रौला (भिडियो)